नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नारीले नारीलाई सम्मान गर्न सिकौँ विभेद आफै समाप्त हुने छ !
नारीले नारीलाई सम्मान गर्न सिकौँ विभेद आफै समाप्त हुने छ !
नारी र पुरुष एक अर्काका पूरक हुन, दुवै दुबैका लागि प्रकृतिले दिएका वरदान हुन, भगवानले गरेका सृस्‍टि हुन, दुवैले दुवैको सम्मान गर्न सिकौँ, विभेद आफै समाप्त हुने छ । अझ विशेष रूपमा नारीले नारीलाई सम्मान गर्न सिकौँ विभेद आफै समाप्त हुने छ । सुन्दा तितो लाग्ने तर सत्य के हो भने संसारमा नारी मात्र पुरुषबाट विभेदको सिकार र पीडित बनेका छैनन्, पुरुषहरू पनि नारीबाट पीडित बनेका तथ्य बाहिर आएकै छन्, देखिएकै छन् । अर्को कुरा - आमा र सासूमा किन भेद गर्छन् छोरी बुहारीहरू, छोरी र बुहारीमा फरक किन देख्छन् आमा र सासूहरू ? नारीले नारीलाई गर्ने विभेदका कारण नारी समानतामा ठुलो खाडल छ । घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै
दोस्रो बिहे, तेस्रो बिहे गर्ने पुरुष त अपराधी हुन हुन, त्यो सब थाहा हुँदा हुँदै दोस्रो तेस्रो श्रीमती बनेर भित्रिन जाने नारी पनि अपराधी हैनन् र ? समानता नारामा नखोजौँ, व्यवहारमा खोजौँ । नारीको महत्त्व नबुझ्ने पुरुषहरू र पुरुषहरू जति सबै बलात्कारी जस्ता देख्ने, शत्रु हुन जस्तो गरेर चर्का कुरा गर्ने नारीहरू दुवै समानताका बिरोधीहरु हुन । हाम्रो हिन्दु संस्कृतिले सधैँ नारी पूजन र सम्मान गर्छ । परापूर्व काल देखि शिव पार्वती, सीता राम , राधा कृष्ण , लक्ष्मी, सरस्वती देखि कैयौँ देवीहरूको उँचो स्थान छ सधैँ उनको उपासना , मातृदेवो भव पछि मात्रै पितृ देवो भव । बुझ्ने लाई काफी छ छैन र ? सबै नारीहरूमा चेत आओस्, पुरुषहरूमा पनि चेत आओस् । संसारका सबै नारीहरूमा हार्दिक सम्मानका साथ नारी दिवसको शुभकामना ।